शुद्ध लेख्न, बोल्न यसो गर्ने कि ! | Ratopati
शुद्ध लेख्न, बोल्न यसो गर्ने कि !
personदीपेन्द्र राई exploreकाठमाडौं access_timeसाउन २२, २०७५ chat_bubble_outline0
यसैगरी, २०७४ भदौ १७ गते पहिलो पेजमा ‘धरहरा पुनः ठडिने विषयमा आशङ्का’ शीर्षाकृत समाचार प्रकाशित भएको थियो । राधा चालिसेको ‘बाइलाइन’ मा रहेको सो समाचारको शीर्षक अर्थपूर्ण छैन । आशंकाको अर्थ अनिष्टको सम्भावना वा सम्भाव्यता हुन्छ । तसर्थ, सो समाचारको शीर्षक ‘धरहरा पुनः ठडिने विषयमा शंका’ लेख्दा शुद्ध हुन्थ्यो ।
यस्ता कैयौं शब्द हामीले लेख्दै÷बोल्दै आए पनि अर्थ खुट्ट्याउन प्रयास गर्दैनौ । २०६७ जेठ अंकको मूल्यांकन मासिकको ‘कभर पेज’ मा ‘डेटलाइन जेठ १७’ लेखिएको छ भने सगरमाथा आरोहणपछि पत्रकार आङछिरिङ शेर्पाले लेखेको किताबको नाम ‘डेडलाइन चोमोलोङ्मा’ छ । डेडलाइन र डेटलाइनको अर्थ आकाशपाताल फरक छ । ‘डेडलाइन’ भनेको समयावधि हो भने डेटलाइन भनेको सम्बन्धित पत्रकारले समाचार लेखेको मिति हो । तसर्थ, मूल्यांकन मासिकको ‘डेटलाइन जेठ १७’ नभएर ‘डेडलाइन जेठ १७’ र ‘डेडलाइन चोमोलोङ्मा’ नभएर ‘डेटलाइन चोमोलोङ्मा’ शुद्ध हो । पत्रकार शेर्पाले ‘डेडलाइन चोमोलोङ्मा’ दोस्रो संस्करणमा भने सच्याएका छन् ।